Isaphulelo Somfundi WeTidal (2020) - Bheka Izindlela Zokufaneleka - Izipesheli
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Semali Yomfundi?
Kukhona izindaba ezinhle kakhulu zabafundi abathanda ukusakaza umculo kuhlelo lokusebenza lweTidal. Manje abasadingi ukukhokha ukubhalisa kwenyanga yonke ukuze badlale umculo abawuthandayo futhi balalele umculo wabo. Ngoba manje, abafundi bayakufanelekela ukusakaza uhlelo lokusebenza lweTidal ngesaphulelo esingu-50%.
Abafundi basekolishi bangakhetha uhlelo lokusebenza lweTidal premium kumanani entengo. Ngakho-ke, uma ungumfundi, khona-ke siyakuhalalisela, udinga ukukhokha u- $ 4.99 kuphela ngenyanga, futhi ngeTidalHiFi, udinga ukukhokha u- $ 9.99 ngenyanga.
Ungafinyelela izingoma ezingaphezu kwezigidi ezingama-57 namavidiyo angaphezu kuka-2,30,000 ku-inthanethi ngalezi zintengo ezehlisiwe.
Ngubani Ofanelekela Isaphulelo Somfundi WeTidal?
Izitshudeni eziningi zifuna isaphulelo seTidal Student futhi ziya esihlokweni IV ukuyobheka amanyuvesi afanelekela ukuthola izaphulelo zeTidal. Ngokufanayo namanye amasayithi okusakaza umculo, uTidal naye usebenzisa iSheerID ukuqinisekisa abafundi.
Amanyuvesi namakholishi agunyaziwe afanelekela ukuthola izaphulelo zabafundi baseTidal. Ngaphandle kwalokho, abafundi badinga ukuba neminyaka eyi-18.
Ungasayinela kanjani Isephulelo Sezitshudeni seTidal?
Uma ufanele ukuthola isaphulelo somfundi weTidal, ungaqhubeka ngenqubo yokubhalisa bese uthola izinsizakalo zokusakaza umculo. Ukuze ubhalise, udinga ukulandela lezi zinyathelo ezilula.
Okokuqala, vakashela i-tidal.com bese ungena ngemvume ngokufaka i-imeyili, i-akhawunti ye-Facebook ne-akhawunti ye-Twitter.
Uma usungene ngemvume ku-akhawunti, ungakhetha i-akhawunti othanda ukuba nayo ukuze uphile ngezinsizakalo — ngokwesibonelo, uhlelo lomndeni, uhlelo olujwayelekile, nolunye uhlelo ngokususelwa kokuthandayo.
Lapho usubhalisile, khetha inketho yesitshudeni, bese uqedela inqubo yokubhalisa. Faka imininingwane yokukhokha bese ukhetha uhlelo lwe-premium yesaphulelo somfundi noma uhlelo lweTidal HIFI ukuze ube nekhwalithi ephezulu yomsindo.
Izinyathelo Zokuqinisekisa Njengesitshudeni Ukuthola Isaphulelo Somfundi:
Uma usuqedile ngenqubo yokusayina njengomfundi, ngemuva kwalokho, kuzofanele unikeze imininingwane ebalulekile futhi ukhombise ukuthi ungumfundi. UTidal usebenzisa iSheerID ukuqinisekisa umfundi. Ifomu linamakhasi amabili afaka imininingwane ethile yenqubo yokuqinisekisa.
Gcwalisa imininingwane edingekayo ekhasini lesaphulelo sabafundi iTidal bese ucindezela uqhubeke.
Ngemuva kwalokho, udinga ukuhlinzeka ngemibhalo ethile yaseyunivesithi, kufaka phakathi igama lokuqala, isibongo, isheduli yekilasi, okubhaliwe, ikhadi le-ID. Ungahle udinge ukuhlinzeka ngeminye imibhalo, uma kunesidingo.
Okulandelayo, khetha inketho yokulayisha bese uzulazula kudokhumenti oyidingayo ukuqinisekisa isimo somfundi.
Lapho usulayishe yonke imibhalo bese ucindezela inketho elandelayo, ngemuva kwalokho, isimo sokuqinisekisa sizothunyelwa ku-imeyili yakho. Kungadinga amahora ambalwa kuya ezinsukwini ezimbili ukuqinisekiswa futhi kutholakale isaphulelo seTidal Student.
Uma usuthole isaphulelo se-Tidal Student, uzothola isilingo samahhala sezinsuku ezingama-30 ngokubhaliselwe ukusakaza umculo wakho oyintandokazi nemibukiso. Ngokungafani namanye amasayithi okusakaza lapho udinga ukuqinisekisa kabusha i-akhawunti minyaka yonke iminyaka emine, lapha awudingi ukuqinisekisa kabusha futhi ujabulele ukusakazwa komculo kwamahhala ngamanani ancishisiwe.
Uma kukhulunywa ngezinsizakalo zokusakaza umculo, iTidal ingenye yezinto ezinhle kakhulu. Kuyaziwa kakhulu ngomsindo wekhwalithi ephezulu. Uma ungumfundi futhi uzimisele ukuthola isaphulelo seTidal Student bese ulandela zonke izinyathelo ezibalulwe ngenhla bese uqala ukushaya umculo wakho owuthandayo usohambeni.
Isaphulelo se-Amazon Prime Student (2020)
UTom Sturridge Movie & TV - Kufanele Ubuke